စားဖိုမှူးများအဖွဲ့- ♥ မြန်မာချစ်သူမိသားစု ♥
All Groupsသင်၏အဖွဲ့ များ စားဖိုမှူးများအဖွဲ့ 
ရှင်း မှ တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်
Latest Activity: May 11 မျှဝေမယ် Twitter
ဟင်းချက်နည်းလေးတွေ ဝေမျှပြီး ဖလှယ်ကြရအောင်.....နော်
ထမင်းပေါင်း လေး အိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်စားမယ်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by chitthunyein May 11. ဝက်သားမီးကင်သုပ် (ထိုင်းစတိုင်)
Started by ♥´*•♫♥✿*•♫♥မေသဇင် ♥´*•♫♥✿*•♫♥. Last reply by chitthunyein May 11. ငါးချဉ်သုပ်
Started by ရှင်း. Last reply by htaymin thu Apr 27. ရှမ်းထမင်းချဉ်လုပ်စားကြမယ်
Started by Thidar lwin. Last reply by အိမ်ကြာဖြူ Feb 22. ထိုင်းစတိုင် ပဲကြာဇံသုတ် စပ်စပ်လေးနော်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by Thidar lwin Feb 21. ခရစ်စမတ်ပွဲတော်အတွက် ★ ☆ခရစ်စမတ်ပူတင်း★ ☆
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by ထင်လင်းသာ Dec 25, 2012. ကဲ....ယိုးဒယား သင်္ဘောသီးထောင်း စပ်စပ်လေး စားကြမယ်.....
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by ကဗျာနွယ် Nov 28, 2012. အသားနဲ့အာလူးသီးနပ်(ရှမ်း တရုတ်စတိုင်လ်)
Started by ရေလှိုင်းလေး. Last reply by awnluluseng Nov 26, 2012. စားကြအုံးမလား ချဉ်ပေါင်ကြော်
Started by ♥´*•♫♥✿*•♫♥မေသဇင် ♥´*•♫♥✿*•♫♥. Last reply by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ Nov 26, 2012. ထိုင်းစတိုင်လ်ကြက်ဆီထမင်းချက်စားကြမယ်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by awnluluseng Nov 23, 2012. ပြည်ကြီးငါး အချိုကြော်ချက်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ Nov 18, 2012. မြောက်ပိုင်း အိန္ဒိယစတိုင်လ် ကြက်သား ဒန်ပေါက်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ Nov 16, 2012. ထိုင်းစတိုင်လ် ငပိထမင်းကြော် နဲ့ ကျောက်ပွင့်သုပ်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ Nov 15, 2012. သာခွေယိုင် လေး လုပ်စားကြမယ်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by ko thein htay Oct 28, 2012. Admin
♥ ငါးနဲ့ ပဲပုစွန်သီးချဉ်ရည် ချက်စားကြမယ် ♥
Started by ♥ white ♥. Last reply by Maylei Oct 22, 2012. လွယ်လဲလွယ်..ဈေးလဲသက်သာတဲ့...ငါးနီတူနဲ့ထမင်းကြော်စားရအောင်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by Maylei Oct 19, 2012. ကင်းမွန် (သို့) ရေဘဝဲဟင်း လေးချက်ရအောင်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by Maylei Oct 19, 2012. အုန်းထမင်းနှင့် ကြက်သားဟင်း
Started by ရဲဂျာ. Last reply by Maylei Oct 19, 2012. ကင်ချီ ထမင်းကြော် (ဘိုကမ်ဘတ်) လေး လုပ်စားကြည့်ရအောင်နော်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+. Last reply by ko thein htay Oct 7, 2012. အိန္ဒိယအစားအစာ အာလူး ပူတီ(OR) ချာပါတီ လေးလုပ်စားကြရအောင်
Started by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ Sep 12, 2012. အားလုံးကြည်ရန်
You need to beamember of စားဖိုမှူးများအဖွဲ့to add comments!
Comment by လုံးလုံး on February 28, 2013 at 2:10am လုပ်စားကြည့်တော့မယ် ကျေးဇူးနော် Comment by နေနေ on February 22, 2013 at 1:01pm အခုတောင်စားချင်လာပြီ Comment by maylay on January 31, 2013 at 1:23am လာပြီနော်....ချက်ဖို့တော့ ဟုတ်ဘူး.....စားမို့ ၀ါးမို့.....တရေကျလာပြီ...( ဂလု ) Comment by moemamachomya on December 25, 2012 at 9:36pm ၀ါသနာပါလို့ဝင်လေ့လာသွားပါတယ်...
နောက်တခါမှဝင်ပြီးချက်တော့မယ်....ခုတော့သရေပဲသုတ်သွားတော့မယ်..ဟိ Comment by lawoon on November 25, 2012 at 12:38pm အဖွဲ့ဝင်လိုက်ပါပြီး..ယိုးဒယားသင်္ဘောသီးထောင်းနည်းကိုတင်ပေးပါအုံးနော်. Comment by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ on November 21, 2012 at 8:46pm ဟုတ် .... ခင် လက်လှမ်းမီသလောက် မျှဝေပေးပါ့မယ်နော်......ကျန်တဲ့ မောင်နှမတွေလဲ ပါဝင်ကူညီ အားဖြည့်ပေးကြပါဦးလို့...... Comment by thandar on October 28, 2012 at 11:07pm အရမ်းကောင်းပါတယ်ဟင်းချက်နည်းများများပို့ပေးပါထမင်းဘူး
ဟင်းမထပ်အောင် Admin Comment by ko thu rein on October 1, 2012 at 12:32pm ချက်တတ်ဘူး..ဂရု ထဲ မျာဟင်းချက်ကောင်းတဲ့သူရှာမယ်..ဒါဗြဲ...ငှိငှိ..ခ်ေိ Comment by +◦°°◦°°◦❀ ℜHIN ❀◦°°◦°°◦+ on September 14, 2012 at 12:01pm ဦးဦးည၈တူ ဗိုက်ဆာနေတယ်ဆိုလို့......... ကြေးအိုးးးးးးး Comment by ညချစ်သူ on September 11, 2012 at 11:25pm ရောက်လာခဲ့ပါပြီ ဗျာ ။
အခုတော့ ဗိုက်ဆာနေတယ် ။ ‹ နောက်သို့
7. ချစ်၇အောင် (အညာသားလေး)
8. Chit Snow
9. Ko Nge
15. ★♥♪✞ထာဝရ✞♪♥ ★